नाङ्गिए कमल थापा : राज्यकोषको १५ अर्ब खान खाजेको खुलासा ! • Janaboli
नाङ्गिए कमल थापा : राज्यकोषको १५ अर्ब खान खाजेको खुलासा !
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई गम्भिर आरोप लागेको छ । उनलाई राज्यकोषबाट १५ अर्ब कुम्ल्याउन लागेको आरोप लागेको हो । सरकारबाट बर्खास्तिमा परेका राप्रपाकै नेता दिलनाथ गिरीले उक्त खुलासा गरेका हुन् । उनले १५ अर्बको खेलमा ममाथि झेल भएको आरोप लगाएका छन् । एक अनलाईनलाई अन्र्तवार्ता दिँदै उनले दाबी गरेका छन् कि शहरी विकास मन्त्रालयका अर्बौंका ठेक्का आफू अनुकुल दिएर पैसा उठाउने कमल थापाको योजनामा बाधक बनेपछि हटाइएको हो । आफूलाई हटाउन केही ठेकेदार र बिचौलियाले कमल थापालाई आर्थिक ढाडस दिएको गिरीको दाबी छ ।
अनलाईन खबरमा छापिएको अन्र्तवार्ता यस्तो छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत गुमाएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बुधवारदेखि चुनावी हारको समिक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा जुटेको छ । तर, यो बैठकमा कमल थापापछिको बरिष्ठतामा रहने गरेका नेता दिलनाथ गिरीलाई भने ‘इन्ट्री’ छैन । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद गरेको भनेर शहरी विकास मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका गिरीलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश गर्न दिइएन ।
केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला अनलाइनखबरसँग बानेश्वरमा कुरा गर्दै गिरीले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउनुको रहस्य खोल्दै भने, ‘१५ अर्बको खेलमा ममाथि झेल भयो ।’ उनको दाबी छ कि शहरी विकास मन्त्रालयका अर्बौंका ठेक्का आफू अनुकुल दिएर पैसा उठाउने कमल थापाको योजनामा बाधक बनेपछि हटाइएको हो । आफूलाई हटाउन केही ठेकेदार र बिचौलियाले कमल थापालाई आर्थिक ढाडस दिएको गिरीको दाबी छ ।
मेरो बर्खास्ती मन्त्रिपरिषदमा भएको सामान्य विवादका कारण मात्र होइन । त्यो चाहिँ एउटा परिघटना मात्र हो । मैले हट्नुपर्ने विषयबस्तु त्यहाँ थिएन । तर, पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अभिष्ट पूरा गर्ने सन्दर्भमा मैले गलत काम गर्न मानिन । चुनावमा पैसा उठाउनू र त्यो पैसा कोषाध्यक्ष उद्धब पौडेललाई दिनू भन्ने उनको निर्देशन थियो । मैले मन्त्रीको ओहोदामा बसेर पैसा उठाउने काम गर्न सकिन । पछि कमल थापाले नै मन्त्रालयबाट हुने आर्थिक कामहरु राज्यमन्त्री कुन्ति शाहीलाई दिनुस् भन्नुभयो । मैले उहाँलाई दिएँ । तर, पैसा उठाउने काम मबाट हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँले इगो बनाउनुभयो । यस्तै यस्तै धेरै कारण छन्, जसले गर्दा उहाँले मलाई बर्खास्त गर्न लगाउनुभयो । यसमा धेरै ठूला ठूला चलखेलहरु भएका छन्, ती चलखेललाई अनुकुल बनाउन मलाई बलिको बोको बनाउन खोजिएको हो ।
कमल थापाले राजालाई पनि धोखा दिए, जनतालाई पनि धोखा दिए । यसको साक्षी त म आफैं छु नि । कमल थापाले आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्टका लागि मात्र राजतन्त्र र हिन्दूत्वको कुरा गरेका हुन् । उनले पार्टीमा आफूलाई चुनौति दिने र असहमत राख्नेलाई टिक्न दिँदैनन् । हाम्रो गाउँतिर एउटा कुरा प्रख्यात छ, अन्नबाली पाक्ने बेला मुसाले सात बिहेसम्म गर्छ । किन गर्छ भन्दा अन्नपानी स्टोर गर्नका लागि बिहे गर्छ । जब बाली स्टोर गरिसक्छ, त्यसपछि एकएक गर्दै श्रीमतीहरु निकाल्छ । त्यहि ढंगबाट कमल थापाजीको चरित्र अघि बढेको छ ।
यति नांगो रुपमा कमल थापा आइसकेपछि त्यहाँ बसेर केही अर्थ छैन । यो पार्टीमा उनीबाट तमाम साथीहरु पीडित छन्, कसैको पनि भविष्य सुरक्षित छैन । म जस्तो ४८ वर्षसम्म कमल थापासँग निरन्तर साथमा रहेको मान्छे सुरक्षित रहन सकिनँ भने अरु को सुरक्षित होला रु कमल थापाबाट साथीहरु आतंकित छन् । अब मेरो काम भनेको प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा राष्ट्रवादी, पशुपति शम्सेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग बसेर छलफल गर्छु । हामी एकजुट भएर अघि बढ्न नयाँ ढंगले जान्छौं । विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति पार्टीहरुसँग पनि छलफल गर्छौं । वृहत छलफल गरेर मुलुकलाई तेस्रो शक्ति दिनुपर्छ । मुलुकमा अब तीन दलको अस्तित्व हुन्छ । एउटा वामपन्थीहरु, एउटा प्रजातान्त्रिक र अर्को कन्जरभेटिभ । कन्जरभेटिभको नेतृत्व गर्नेगरी हामी अघि बढ्छौं ।